Heshiis Colaad joojin ah oo markale maanta ay saxiixeen hogaamiyayaasha soomaalida.
Waxaa maanta aqalka madaxtooyada dalka kenya ka dhacday xaflad lagu saxiixay heshiis cusub oo colaad joojin ah kaas oo la magac baxay 29ka Jauary ee 2004, Waxaa kaloo munaasabadan lagusoo gaba gabeeyay wajiga labaad ee shirka soomaalida kadib markii xalay heshiis buuxa laga gaaray qodobkii xulashada xubnaha baarlamanka.
heshiiskaan ay maanta hogaamiyaasha somaliyeed wada saxiixeen ayaan waxaa goob joog ka’ahaa Madaxweynaah Dalka Kenya Mwai Kipaki iyo mash’uuliyiin sar sare oo socday Uruu goboleedka IGAD Iyo waliba beesha Caalamka.
Markii ugu horaysay waxaa qalinka ku duugay colaad joojinta Muusa suudi oo matalayay goalaha samata bixinta , waxaa ku xigay Maxamed dheere oo ku saxiixay maamulkiisa Jawhar, kooxda SRRC waxaa u saxiixay Sheekh Aden Madoobe, G8ka waxaa u saxiixay Maxamed Qanyare Afrax, Puntland waxaa u saxiixay Col. Cabdulaahi Yuusuf Axmed, Dawladda kumeel gaarka waxaa u saxiixay Raisul wasaare Maxamed Cabdi yuusuf, halka bulshada rayidka ay u saxiixeen Shariif saalax, Caasha xaaji Cilmi iyo Jaamac maxamed qaalib.
Hogaamiyayaasha oo maanta ay ka muuqatay farxad iyo damaashaad waxaa ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ay halkan ku dhistaan dawlad loo dhanyahay iyadoo ay dhabanada iska dhunkadeen hogaamiyayaasha mid mid waxaana ka mid ahaa Muuse Suudi iyo Col Cabdulaahi Yuusuf oo is gacan qaaday.
Kalonzo musyoka oo ah wasiirka arimaha dibada ee Kenya ayaa manta isna halkaasi ka sheegay in xalay lagu heshiiyay in baarlamanka ay soo xulaan TNG,Maamulada gobolada iyo dagmooyinka,SRRC,Samata Bixinta, G8 iyo Bulshada Rayidka iyadoo ay ansixin doonaan odayaasha dhaqanka ee shirku aqoonsanyahay.
Waxaa kaloo kalonzo uu sheegay in sabtida la ansixin doono Axdiga federaalka kumeel gaarka ee soomaaliya si loogu gudbo wajiga sadexaad ee awood qaybsiga oo baarlamanka ay beeluhu soo qaybsan doonaan mudo 30 maalin gudeheeda, kadibna loo gudbi doono qaybaha kale ee shirka soomaalida.
Madaxwaynaha dalka Kenya Mwai Kibaki oo isna xafladaas goob joog ka ahaa ayaa sheegay in hogaamiyayaashu ay dhamaystiraan heshiiska ay gaareen oo meel dhexe ayna kaga tagin, isagoo sheegay in gobolka ay danaynayaan xasilooni ka dhalata dalka soomaaliya.